सेयरबजार ‘ग्रिन जोन’ मा, अबको दिशा ‘बुल’ Bizshala -
वरिष्ठ उपप्रमसहित अर्थमन्त्रीको दाबी नछाडेपछि बामदेव गौतमलाई पछार्ने खेल
कोभिड प्रोटोकलको पूर्णपालनाका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई परिसंघको आग्रह
यसपालिको दशैंमा घर जान ट्याक्सी सेवा सञ्चालनमा, इजी ट्याक्सी नेपाल एपमार्फत बुकिङ्ग खुला
सानिमा इन्स्योरेन्सलाई ३० लाख कित्ता आइपीओ निश्कासनको अनुमति
सेयरबजार ‘ग्रिन जोन’ मा, अबको दिशा ‘बुल’
काठमाण्डौ । गत साता नेप्से इन्डेक्स ११ सय १० अंकआसपास झिनो अंकको उतारचढाव भइरहेकोमा सोमबारदेखि सेयरबजारले ‘यू’ टर्न लिएको छ ।
बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुका सेयरमूल्य ‘बटम लाइन’ आएको र पीई रेसियोसमेत १०÷११ मा आएपछि न्यून मूल्यमा अधिक खरिदचाप परेर माग सिर्जना हुने सिद्धान्तबमोजिम बजारले बढ्ने गति लिएको छ । यही सातादेखि बजारले लिएको लयबारे जिज्ञासा राख्दा अनामनगरस्थित एक ब्रोकर नेप्से इन्डेक्सको क्रमिक र अनुशासित वृद्धिले बजार अब ‘बुल’ हुने संकेत दिएको दाबी गर्छन् । अब लगानीकर्ताहरु ‘ग्रिन जोन’ मा रहेकाले लगानी गर्ने उपयुक्तसमेत भएको ती ब्रोकरको जिकिर छ । अर्थतन्त्रमा भएको सुधारले सेयरबजारमा पनि आगामी दिनमा सकारात्मक असर पर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
साताको कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से इन्डेक्स ७.४५ अंकको वृद्धि केही दिनयता विस्तारै बढ्दै सेयरबजारमा हरियाली छाएको छ नै इन्डेक्स वृद्धिले आम लगानीकर्ताहरुमा आशा र मनोबलकै कारण कारोबार रकममा समेत इन्डेक्सकै अनुपातमा बढ्दै गएको छ । बलिया र राम्रा कम्पनीहरुमा खरिदारी चाप बढी देखिएको छ । बिमा र लघुवित्त कम्पनीहरुमा यसअघि देखिएको उच्च गिरावट थामिएर उकालो लाग्ने चरणमा छन् । केही दिनयता ती कम्पनीहरुमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण पनि ह्वात्तै बढ्दै देखिन्छ ।
आजको दिन नेप्सेका १२ वटा उपसमूहमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधनमा बाहेक सबैमा हरियाली छाएको छ । यो दिन उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहमा १५.१४ अंकको गिरावट आयो ।
सबैभन्दा बढी जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा उपसमूहमा क्रमशः १५३.२१ र ७१.९९ अंकको बढोत्तरी भयो । त्यस्तै बैंकिङ, व्यापार, होटेल्स, विकास बैंक, वित्त, अन्य, लघुवित्त र म्युचुअल फन्डमा क्रमशः २.११, १६.३७, १६.४७, ६.५३, ८.७३, १.५८, ४.२, २४.५५ र ०.११ अंकले वृद्धि भयो ।
आजको दिन नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये १६८ कम्पनीका १० लाख ९५ हजार १८८ कित्ता सेयर ३५ करोड ८८ लाख ३९ हजार ८६० रुपैयाँमा किनबेच भयो ।
यो दिन ६ वटा कम्पनीले करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्न सफल भए । जसमा सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ३ करोड ५१ लाखरुपैयाँबराबरको कारोबार गर्न सफल भयो । त्यस्तै एनएमबी बैंक, स्वावलम्बन लघुवित्त, नेपाल बैंक, हिमालयन डिस्टिलरी र सामुदायिक लघुवित्तले क्रमशः २ करोड २२ लाख, १ करोड २६ लाख, १ करोड २४ लाख, १ करोड १७ र १ करोड १३ लाख रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्न सफल भए ।
यसैगरी करोडभन्दा मुनि एनआईसी एसिया बैंक, नबिल बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक र जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तले क्रमशः ९८ लाख ७९ हजार, ९५ लाख ८७ हजार, ९० लाख १७ हजार र ८२ लाख ७७ हजार रुपैयाँबराबरको कारोबार गरे ।
धेरै कमाउने र गुमाउने कम्पनी
आजको दिन बजारमा तीनवटा लघुवित्त कम्पनीका सेयरधनीहरुले बढी कमाए । समिट, गणपति र सामुदायिक लघुवित्तका सेयरमूल्यमा क्रमशः ७.७८, ६.८८ र ६.७७ प्रतिशतले बढोत्तरी भएकोसँगै सेयरधनीहरु मालामाल भएका हुन् ।
यस दिन दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनीका सेयरधनीहरुले धेरै गुमाउनुपर्यो । यो कम्पनीको सेयरमूल्यमा ७.०१ प्रतिशतले गिरावट आयो ।
‘कोरोना कम हुनासाथ नियमित रेल सञ्चालन हुनेछ'
कोरोनाका कारण २४ घण्टाभित्र १६ को मृत्यु, ३१ जना भेन्टिलेटरमा
विदेशका जस्तो पनि कम्पनीबाट विप्रेषण पठाउन नपाइने: गरियो कडाईँ, थपियो शर्त
लगानीकर्ता नाफा बुक गर्नतिर लाग्दा बजार करेक्सन मुडमा
विश्वका सर्वाधिक धनी १ प्रतिशतले अतिगरिबको भन्दा ५० गुणा बढी कार्बन प्रदूषण फैलाए : अध्ययन
सानिमा इन्स्योरेन्सलाई ३० लाख कित्ता आइपीओ निश्कासनको
काठमाण्डौ । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई ३० लाख कित्ता आइपीओ...
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार नेप्से परिसूचक...
नेप्सेको टिएमएस ह्याकरले कब्जा गरेका हुन् ? छानबिनको माग
काठमाण्डौ । नेप्सेको टीएमएस(ट्रेडिङ मेनेजमेन्ट सिस्टम)बाट सेयर...
नेप्सेमा समाज लघुवित्तको सूचीकरण यसै साता
काठमाण्डौ । समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर यही साता...
मेरो सेयर एपमा तत्काल आस्वा सेवा उपलब्ध नहुने
काठमाण्डौ । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले भर्खरै...
सिभिल बैंकको जबाफ : हिमालयन बैंकले प्राप्ति गर्ने खबर
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडले हिमालयन बैंक लिमिटेडले सिभिल...
एनएमबी हाइब्रिड फन्ड एल १ र एनएमबी ५० को प्रतिफल घोषणा, बुक
काठमाण्डौ । एनएमबी म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित एनएमबी...
अबदेखि आइपीओ आवेदन गर्दा 'पिन कोड' चाहिने, कसरी लिने ?
काठमाण्डौ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सार्वजनिक निश्कासनको...